Finland na Belgium Euro 2021 Amụma & Atụmatụ Betgba Aka - latabernasanlucar.com
By Sara GrayJune 18, 2021No Comments
Finland na Belgium bụ egwuregwu ikpeazụn’agba otu Euro 2021 maka otu egwuregwu abụọ a. Belgium eruola maka ọkwa knockout ma ọ dịkarịa ala ịbịaru otu B nke kachasị elu.
Finland ka nwere ike iru eru maka egwuregwu ọzọ na-adabere na ihe na-eme na Russia t Denmark egwuregwu yana arụmọrụ ha na Belgium.
Egwuregwu Finland vs Belgium ga-eme na Krestovsky Stadium, St Petersburg, Russia na June 21st na 2100 elekere Central European Summer Time.
Mpempe akwụkwọ Finland, akara amụma na usoro
Finland nọ ugbu a t 54th website FIFA na nke a bụ isi asọmpi mbu nke Finland tozuru oke. Ugo-ikwiikwii dika amaara ha na Finland emeela nke ọma n’afọ ndị na-adịbeghị anya.
A kwalitere Finland t Ray B Uefa Nations na 2018-19 maka oge 2020-21. Ugo-ikwiikwii mechara tozuo maka nke mbụ ha t European Championship mgbe ha gụsịrị Italyn’azụ maka ntozu ntozu nke Euro 2020.
Agbanyeghị, 2021 enwebeghị nnukwu nsogbu na Finland. Tupu egwuregwu mmeghe ha na Euro megide Denmark Finland gbara egwuregwu 5, tụfuru 3 t two.
Egwuregwu mbụ nke Finland megide Denmark bụ ihe dị mwute nke ukwuu maka ndị na-agba bọọlụ bọọlụn’ụwa niile dịka Christian Eriksen daran’ọhịa. Onyeisi ụgbọ mmiri Denmark dị ka ezigbo onye ndu na-elekọta CPR Eriksen ma na-achịkọta ndị otu ya ka ha wuo mgbidi gburugburu Eriksen iji kpuchido nzuzo ya n’ọnọdụ siri ike dị otú a.
Mgbe ọnọdụ Eriksen kwusiri ike, ọ gwara ndị otu ya oge ma gbaa ha ume ka ha gaa n’ihu Otu abụọ ahụ kpebiri ịga n’ihu n’egwuregwu ahụ mgbe kwụsịtụrụ obere oge. Eriksen nwere obi iru ala, dị ndụ ma dịkwa mma. N’oge na-adịbeghị anya, ndị dọkịta wụnye ngwaọrụ a na-akpọ ICD nke na-achịkwa obi mgbawa na-adịghị agbanwe agbanwe.
Finland gbatara website t ọkpụ otu ọkpụ ha gbaran’egwuregwu a ebe Denmark ji obi ike lụọ ọgụ ma debanye aha gbaa 22 na Finland.
Finland na-esote egwuregwu megide Russia nke ha meriri 1-0. Mgbe ọkara nke mbụ Finland gwụrụ nke ọma na ọkara nke abụọ mana emeghị otu. Joel Pohjanpalo nwere ọtụtụ ohere magburu onwe un mgbe isi isi un t ọkara mbụ chịrị dị ka akụkụ.
Usoro nhazi nke Finland bụ 5-3-2n’agbanyeghị na onye isi nchịkwa Markku Kanerva na-eme ha mgbe ụfọdụ na 4-4-2.
Finland na-eme ihe ike ịgbachitere ebe ha na-eji usoro akara nwoke ma na-agba ume ọ dịkarịa ala otun’ime etiti iji bọl na-agbanye.
Ugo-ikwiikwii bụ ụzọ aghụghọ un bụ ịgbanye ngwa ngwa website t ịgbachitere na mbuso agha. Ha na-anwa ime ihe ndị a n’ụzọ abụọ:
Nchebe na-anwa ịnye nri ụzọ gafere otu n’ime mmadụ abụọ na-aga n’ihu bụ ndị na-abụkarị Teemu Pukki na Joel Pohjanpalo.
Finland nwere mmasị igwu na obosara ma nwee mmasị ịmepụta ohere website t mpaghara sara mbara. Onye na-ebuso agha agha na-agba mbọ ịkụ ọkpọ ka onye ọkpụkpọ obosara n’akụkụ nke ọzọ na-abanye n’ime igbe ka ọ gụọ.
Ebe etiti ahụ na-enwekarị ndị na-agbachitere ndị na-agbachitere two dị ka Glen Kamara d e ndị nwere ahụmahụ karịa Tim Sparv bụ onye isi ọ bụ ezie d e Rasmus Schüller nwere ike weghara ebe ya mgbe ụfọdụ. Onye nke etiti nke atọ bụ onye na-etiti mbara na-amalite na aka nri.
Robin Lod juputara ebe that a bu ezigbo ihe okiken’aka nri. Lukáš Hrádecký bu Onyenchekwaebumnobi nwere ikike.
Finland nwere ike ịlaghachi n’ụdị ezigbo nchekwa na kọmpat na-agbachitere.
N’egwuregwu egwuregwu ikpeazụ megide Belgium anyị na-atụ anya ka onyeisi ụgbọ Tim Sparv laghachi na anyị na-atụ anya na Finland ga-awakpo.
Finland Mara amụma akara
Hrádecký, Uronen, Arajuuri, O’Shaughnessy, Olileanya, Stripe, Kamara, Sparv, Lod, Buck,
Formdị Belgium, Usoro akara na Usoro
Belgium ruru eru na EURO 2020n’ụdị website Id mmeri nke ọ bụlan’ime egwuregwu 10 ha ma nyefee naanị ihe mgbaru ọsọ 3, nke kacha nta nke otu ọ bụla nyeren’oge ntozu, na nnọchite Turkey, nke nwekwara ihe mgbaru ọsọ 3.
Roberto Martinez abụrụla onye isi nke Belgian National Team kemgbe 2016. N’okpuru Martinez Belgium gwụchara nke atọ na World Cup na 201 miniature hụ ogologo oge ha kachasị dị ka FIFA 1 website wont Septemba 2018.
Belgium meriri egwuregwu Euro 2020 nke mbụ ha na Russia, jiri mmeri 3-0 merie Lukaku na goolu abụọ.
N’egwuregwu nke abụọ ha na Denmark, Belgium gbalịsiri iken’ọkara nke mbụ ka ha nyechara goolu d e nkeji nke abụọ mana iwebata Kevin De Bruyne gbanwere akụ ha dịka Belgium meririn’egwuregwu ahụ 2-1.
N’egwuregwu ikpeazụ ha, Belgium nwere nanị gbaa 6, 5n’ime ha na-agba ọsọ ebe Denmark nwere oke gbaa 21 gbaa 5n’ime ha jikwaa.
Belgium eruola ugbu that a maka ọkwa knockout ma ha chọrọ naanị 1 isi na otu kachasị B. Anyị na-atụ anya na Belgium ga-ebuso onye a agha.
A haziri ndị otu Belgium nke ọma nke ọma. Belgium na-egwu egwu na usoro 3-4-3 nke yiri 3-2-4-1 na mwakpo. nwere mmasị iji ndidi wulite egwuregwu ahụ, ọbụlagodi igo otu n’ime ndị na-agbachitere etiti na-aga n’ihu na bọọlụ na-aga n’ihu.
N’ụzọ that a na-atụghị anya ya, a na-eji usoro dị ka nke etiti atọ a eme ihe, otun’ime ha bụ bọọlụ na-egwu bọọlụ. Ndị nku ala na-esikarị ike na-arụ ọrụ.
Otun’ime ha, ọ na-abụkarị nku aka ekpe, bụ ihe na-awakpo azụ d e ọtụtụ ndị na-etiti ọkpọ. Ọnọdụ that a jupụtara na Thorgan Hazard ma ọ bụ Nacer Chadli, ha abụọ na-egwu egwun’aka ekpe.
Ihe ozo zuru ezu bu ihe ozo. Ọnọdụ that a jupụtara na Timothy Castagne nke Thomas Meunier. Nke a nwere ike ịhapụ oghere n’akụkụ aka ekpe maka ndị otu mgbagha iji mee ihe, mana Belgium nwere ndị egwu bọọlụ nwere ikike abụọ iji gbochie iyi egwu a.
Na midfield. Belgium na-egwuri egwu nke ọma na-agbachitere ndị na-agbachitere ndị na-agbachitere two na-eme ka ohere dịn’azụ ma nyere ndị na-agbachitere etiti aka. Ọnọdụ ndị that a jupụtara na Axel Witsel na Youri Tielemans ma ọ bụ Leander Dendoncker
Ihu ihu atọ bụ ebe anwansi na-eme na Belgium. Romelu Lukaku bụ onye na-egwu egwu na onye na-eche nche. Ọ dị ike ma nwee ike ịlụ ọgụ maka bọọlụ ogologo miniature jide ha maka ndị otu egwuregwu un ka ha wakpo ya.
Onye gbara un gburugburu na-agbagha otun’ime ndị egwu egwu kachasị mman’ụwa, Kevin De Bruynen’aka nri, na otun’ime ndị agha kachasị mman’ụwa, Eden Hazard. Ihe ize ndụ na-ese n’elu mmiri na ebe a na-akwụ ụgwọ, ebe De Bruyne bụ ikike okike karịa.
Nsogbu amaliteghị na ọtụtụ egwuregwu ndị na-adịbeghị anya maka Belgium na ọtụtụ ndị ọzọ nwere ọgụgụ isi na-amaliten’ọnọdụ ya, gụnyere Leandro Trossard, Michy Batshuayi na Jérémy Doku dị afọ 19 mana na Euro 2021, Yannick Carrassco rụrụ ọrụ dị ebube na ọrụ a.
Mgbe ọ dị afọ 34, Dries Mertens malitekwara egwuregwu ole na ole na ahụmịhe ya na-enyere aka ịzụ ndị mwakpo ụmụaka dị ka Doku.
Belgium Mara amụma akara
Mgbe Castagne bulitere mmerụ megide Russia, Meunier ga-amaliten’ọnọdụ ya na egwuregwu Finland na Belgium.
Anyị na-atụ anya ka Thorgan Hazard bidon’ihi na ọ nọn’ọnọdụ dị mma na Euro 2020. Witsel welitere mmerụ ahụ tupu Euro 2021 miniature hapụ egwuregwu mmeghe megide Russia miniature bịa ka ọ bụrụ nnọchi anya Denmark.
Anyị kwenyere na Witsel agaghị anọn’ahịrị mmalite ka o adorable dabara nke ọma maka ọkwa knockout. Dendocker nọ na-arụ ọrụ dị ka onye nnọchi anya Witsel na Euro ma ọ na-arụ ezigbo ọrụ yabụ anyị tụrụ anya na Dendocker ga-ebido.
De Bruyne nwekwara mmerụ ahụ nke only t ọ nọghịn’ahịrị mmalite maka egwuregwu two mbụ. Dị nnọọ ka Witsel anyị kwenyere na ọ gaghị amalite n’ihi na onye isi nchịkwa ga-agba mbọ hụ na ọ dabara nke ọma maka ọkwa knockout.
Eden Hazard na-egwuri egwu nke ọman’oge Euro ma ọ nwere ike ịmaliten’aka ekpe, anyị na-atụ anya ka Dries Mertens zuru ike na Carrasco ga-amaliten’aka nri.
Courtois, Vertonghen, Denayer, Alderweireld, Thorgan Hazard, Tielemans, Dendoncker, Meunier, Eden Hazard, Carrasco, Lukaku
Finland na Belgium Euro 2021 Amụma
Anyị na slotfreespin na-atụ anya na Finland ga-ewe iwe megide Belgium. Belgium nwere ike ịnwa ịnọdụ ala ma belata oge ahụ ka ọ na-achọ iti Finland na tebụl mana Belgium na-ele anya na nke mbụ B ka ha miniature nwee obi ọjọọ na mwakpo ahụ.
N’ikwu ya, anyị nwere obi abụọ na Finland ga-enwe ike imeri Belgium ndị FIFA họọrọ 1 website Id September 2018.
Anyị na-ebu amụma t Finland t Belgium, Belgium ga-emeri 3-1.
Finland na Belgium Euro 2020 Nsogbu
Anyị ekwuola nsogbu maka Finland na Belgiumn’okpuru:
Finland 10.0tug 5.20Belgium 1.32
Blog t nsogbu ndị a, anyị nwere ike ịhụ nke ọma na ndị na-eme akwụkwọ na-atụ anya na Finland ga-enwe ezigbo ohere iji merie egwuregwu a ebe Belgium bụ ọkacha mmasị kachasị mma.
Onyinye onyinye akwukwo kacha mma maka Finland na Belgium
Finland na Belgium Euro 2021 Atụmatụ ịkụ nzọ
Dịka anyị kwuburu na ngalaba amụma amụma Finland na Belgium nke isiokwu a, anyị na-ebu amụma na Belgium ga-emeri 3-1. N’ihi nsogbu dị elu maka Belgium anyị anaghị adụ gị ọdụ ka ị nọrọ na Belgiumn’ihi na ị gaghị enweta nnukwu uru website Id ịgba nzọ dị mfe.
N’ikwu nke a dị ka nkwarụ nkwarụ, ihe karịrị /n’okpuru nhọrọ ịkụ nzọ nwere ike bụrụ uru bara uru ọ bụghị naanị maka egwuregwu Euro 2020 an’etiti Belgium na Finland kamakwa ọtụtụ egwuregwu bọọlụn’oge Euro na ọkacha mmasị na okpuru.
Ndị that a bụ ụfọdụ ndụmọdụ ịkụ nzọ anyị nwere maka gị na Finland t Belgium egwuregwu t Euro 2020:
Handicap 2: 0 t Belgium iji merie. Nsogbu 3.35 Measure 3: 0,” watch. Nsogbu 5.60Pukki iji akara, Belgium iji merie. Nsogbu 8.0Pohjanpalo iji nweta akara, Belgium iji merie. Nsogbu 11.0Belgium iji merie na otu abụọ ga-akara. Nsogbu 3.50Otu otu iji nweta akara, ihe kariri 2.5 ihe mgbaru ọsọ iji merie un t Belgium iji merie. Nsogbu 3.55